Ise ọnọdụ zọ akụkụ
The zọ akụkụ na-ezo aka a na-akpụ usoro nke itinye a ike a efere, a warara, a anwụrụ, a profaịlụ, na dị ka site a pịa ma a ebu na plastically deform ma ọ bụ ikewapụ na zọọ akụkụ, si otú inweta a workpiece nke a chọrọ mmetụta na size.
Ma ise ọnọdụ ga-zutere:
1, na nhazi nke metal zọ akụkụ kwesịrị uru na nhazi nke ẹdude akụrụngwa, usoro na ngwá na usoro dị ukwuu dị ka o kwere omume.
2, na metal zọ akụkụ nhazi na ikpe nke huu nkịtị were, na-agbalị ime ka akụkụ ziri ezi larịị ma elu roughness larịị chọrọ ala, na bụ eme ka ngwaahịa ibe, belata mmefu, ma hụ na ngwaahịa mma ma kwụsie ike.
3, metal zọ akụkụ nhazi ga-mfe ke udi na ezi uche na-Ọdịdị, iji mfe ebu Ọdịdị na mfe ọgụgụ nke Filiks, ya bụ, iji mezue nhazi nke zọ akụkụ na ọ dịghị ihe ọzọ na mfe zọ usoro, belata nhazi site ụzọ ndị ọzọ, na bara uru zọ ọrụ mmemmem nzukọ nke ígwè ọrụ na akpaghị aka mmepụta ntọt ọrụ arụpụtaghị.
4, metal zọ akụkụ nhazi ga izute ngwaahịa were na technical arụmọrụ, na nwere ike mfe kpọkọtara na rụziri.
5, na nhazi nke metal zọ akụkụ ga-adị mma iji rụọ itinye n'ọrụ nke metal ihe, na-ebelata dịgasị iche iche na nkọwa nke ihe, na mbenata na oriri nke ihe dị ukwuu dị ka o kwere omume. Jiri ala-na-eri ihe n'ebe ọ bụla o kwere omume, na-eme ka akụkụ dị ka free dị ka o kwere na na obere n'efu.
Post oge: Jan-04-2019